सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल — Sanchar Kendra
२ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि सुर्खेतमा आ’क्रमण, कति जना छन् घाइते ? हेर्नुहोस भिडियोसहित
३प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसले दियो ह’त्या गर्ने धम्की ?
४राउटे युवतीमाथि भएको यौ’न दु’र्व्यवहारको भिडियो प्रसारण गर्ने साइट बन्द हुने, अदालतले दियो यस्तो आदेश
५नेपालको पूर्वी भेगबाट भित्रियो मनसुन, यस्तो छ आगामी ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान
६चौतर्फी बिरोध हुँदा पनि बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ओलीको निर्णय
७अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या भयावह हुन्छ- ठाकुर
८सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले किन मजाकमा उडाए बाइडेन-जोनसनको याे एक तस्बिर ? यस्ताे छ कारण
९नीशाको त्यो दुर्घटना जसले अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी गरायो
१०आज ३७५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६७ को मृत्यु
११सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध जाने भयो एमाले, सुवास नेम्वाङको यस्ताे खुलासाले ओली तनावमा
१२काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा लम्ब्याइदै
सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता सुरू भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार दिउँसो ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता’ सूरू भएको हो।
पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाउनेलगायत विषयमा उनीहरूबीच कुराकानी भइरहेकाे स्रोतले बताएको छ। गत शुक्रबार ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले कार्यदल बनाउने अधिकार अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई दिएका थिए।
नेता नेपालले २०७५ जेठ २ कै संरचनाअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्। एमालेको विवाद समाधान उन्मुख रहेका बेला बागमती प्रदेशमा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको भिडन्त रोचक मोडमा पुगेको छ ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष समेतको सहयोगमा विपक्षी गठबन्धनबाट एमालेसमर्थित खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार रहेका छन् भने एमालेबाटै रामबहादुर थापा बादल उम्मेदवार छन् । केन्द्रमा एमाले नेताहरु मिलेका छन्, बागमती प्रदेशमा भने बागी उम्मेदवारको चर्चा छ ।
​चुनावको दिन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बादललाई भोट हाल्ने भएको छ । सो पार्टीका वरिष्ठ नेता दीपक बोहराले पार्टीले एमालेलाई सघाउने जानकारी दिए । ‘पार्टीले आधिकारिक निर्णय त गर्न बाँकी नै छ, हामीले एमालेलाई नै सघाउँछौं । पार्टीमा त्यही अनुसार अनौपचारिक कुरा पनि भइसकेको छ ।
एमाले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा रहेको बेला काँग्रेस–माओवादीसमेतको समर्थनमा एमाले समर्थित भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाइएको र हाल एमालेको विवाद समाधान उन्मुख हुँदै गर्दा उपनिर्वाचनमा माधव समूहको भोट कता रहने भन्ने अन्योलका साथै भिडन्त रोचक बन्ने देखिएको हो ।
कमल थापालाई ओलीको फोन !
यसैबीच पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार रहेका गृहमन्त्री समेत रहेका बादललाई भोट माग्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई फोन गरेका छन् । शनिबार पार्टीका ३ अध्यक्षसहितको शीर्ष नेताको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले यसबारे ब्रिफिङ गरेका छन् ।
उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर निर्वाचनमा सहयोग मागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसबारे बैठकमा छलफल हुनुका साथै आधिकारिक पत्र आए ओलीलाई नै मत दिने बारेमा निष्कर्ष निकालिएको राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार अहिलेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवारबारे नै अन्योल रहेको र ओलीसँग विगतमा पनि भएको सहकार्यको आधारमा बादललाई नै मत हाल्नु हितकर हुने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
राप्रपाको प्रदेशसभामा २ सांसद रीता माझी र रीना गुरुङको प्रतिनिधित्व छ । उनीहरुको मतभार ९६ हुन्छ । स्थानीय तहतर्फ धादिङको रुबिभ्याली गाउँपालिकाका अध्यक्ष चेरुत तामाङ र उपाध्यक्ष बिना लामासमेत मतदाता हुन् । उनीहरुको मतभार ३६ हुन्छ । यस हिसावले उपनिर्वाचनमा राप्रपाको जम्मा मतभार १३२ छ ।
राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठले एमालेले आधिकारिक पत्र पठाउन बाँकी रहेकाले सो पत्र प्राप्त भएपछि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्ने बताए । उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशका १०९ जना र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू २३८ जनाले मतदानमा भाग लिनेछन् । यीमध्ये माधव पक्षले भोट दिँदा मात्रै डा. देवकोटाले जित्ने सम्भावना छ ।